Indlela for okuzingela Water umphunga Transmittance of Packaging lwezonyango - China Wellform Packaging Group
Inkxaso Call +86 536 8513092
Support email Wellform.Inquiry.Google@outlook.com
bag T-shirt eprintiweyo
enemigca T-shirt ibhegi
T-shirt bag kuluhlu
Drawstring Rudi Bag
Rudi bag kuluhlu
Star Kwavingcelwa Rudi Bag
bag nokupaka Food
Fruit nezilimo Bag
100% Compostable PBAT & Corn wesitatshi- Bag
D2W & EPI Izongezelelo msinyane Bag
bag yokubamba AGENDA iDie
Loop yokubamba ezithwala Bag
Ezilahlwayo PE ifaskoti
Indlela for okuzingela Water umphunga Transmittance of Packaging Medical
Indlela ukuze uhlolo umphunga wamanzi permeability lweengxowa zonyango
iingxowa Medical kunye ubunzima ukukhanya kwayo, amandla aphezulu, uphawu elungileyo kunye noxinzelelo kunye nezinye izinto eziluncedo, kuxhaphaka ukubuyisela iintsuba zonyango iglasi, sisetyenziswa ngokubanzi amayeza zomlomo esiqinileyo namayeza nokupakishwa udidi ulwelo. Umphunga wamanzi yinto ebalulekileyo echaphazela umgangatho nokhuseleko lwamachiza, ukuze kuthintelwe ifuthe umphunga wamanzi kumachiza, iingxowa lwezonyango kufuneka ukumelana elihle ukufuma ukuqinisekisa umgangatho imveliso kunye nokhuseleko. Kweli phepha, inkqubo permeability uvavanyo umphunga wamanzi izingxobo yezamayeza ngokufutshane kuqaliswa ngo-ile kunye PERME BMI W3 / 330 inkqubo zovavanyo rate ukudluliselwa Labthink xa umphunga wamanzi.
Umphunga transmission rate Amanzi ikakhulu libhekisela kwisingxobo zonyango kwi Ukuqhela umphunga wamanzi, umsebenzi ukumelana ukunyakama kuchaphazela ngqo umgangatho iziyobisi ithuba lokugcinwa kwempahla, kodwa kukho into ebalulekileyo ekuhlalutyeni ezikhabhathini. Emva kokuba uhlolo ingaphatha kunyuka wamanzi ontununtunu kwaye kukuvela iziyobisi manzi umbuzo wulahle.
Labthink W3 / 330 inkqubo permeability test umphunga wamanzi, electrolytic sensor test siseko, ifowuni isebenzisa ezintathu kwigumbi lovavanyo block ukuhlanganiswa iteknoloji elilodwa lomenzi, ulawulo ikhompyutha, uvavanyo esebenzayo ngokupheleleyo, nokubotshwa iisampuli, nqakraza kwi uphando Unako ukuthatha inyathelo kunjani, thatha inyathelo lokuphelisa ukufuma, ubushushu, isantya sokuqukuqela kunye nezinye iinjongo ze kolawulo, kokugqitywa umfuniselo inyathelo ukuchonga kunye neengxelo umba. Esi sixhobo kwakhona ukudibanisa oomatshini satellite ezilithoba, uvavanyo lwemizekelo 30 ekupheleni, kokubini ngokusebenza iqondo esizisebenzelayo, amandla test, Isisombululo uhlolo kunye nemida zohlolo bafikelele kwinqanaba eliphezulu ngamazwe, kunye neenjongo ezininzi Kwakhona igcine phambili .
Inkqubo yokuhlola imi ngolu hlobo lulandelayo: isampuli blister pre-ngayo ibekwa egumbini test, kwaye nitrogen le ukufuma kuyimfuneko iyasebenza ngaphandle pack blister. Limsulwa nitrogen eliphezulu iyasebenza ngaphakathi pack blister ngenxa phambi ithambeka ukufuma, uwele Iimolethyuli umphunga ngokusebenzisa umboniso evela ngaphandle blister ukuya ngaphakathi ye-nitrogen ntumbuluko eziphakamileyo, olwenziwe yi-nitrogen esebenzayo ukuya woluvo, ngokusebenzisa woluvo ukulinganisa uhlalutyo xi umphunga wamanzi, uze ubale permeability umphunga wamanzi kunye nezinye iparameters the ukuxhathisa uvavanyo isampuli yahlaziywa.
Kakade ke, ekuqinisekiseni ekupakishweni iingxowa zonyango umphunga wamanzi ngokusebenzisa ekujoliswe emva kudlula, kodwa kufuneka ezinye ekujoliswe ezifana ukunganyangeki ukufuma, ngokulitywina, njl ukulawula, ukuqinisekisa umgangatho kwempahla ngexesha ezikhabhathini.
ixesha Post: Jun-13-2018
Wellform Packaging Group Co., Ltd. (WPG) iye zemveliso noshishino zonke iindidi zokuzikhusela bhetyebhetye zokubopha kunye noshicilelo iimveliso, iminyaka.
Indlela for okuzingela Water enkungwini Transmit ...
Kufuneka zepistasi ugcinwe njani